३ वर्षअघि प्रेम बिबाह गरि ल्याएका श्रीमानले नै स’खाप पारे सुम्निमाको जीवन ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/३ वर्षअघि प्रेम बिबाह गरि ल्याएका श्रीमानले नै स’खाप पारे सुम्निमाको जीवन !
‘सुम्निमा हराई ! खोजी गरिरहेको छु, सोनाम लामाले केही दिन अघि ससुरालीमा फोन गरेर जानकारी गराए ।छोरी हराई भन्दा सुम्निमाका तनहुँ बन्दीपुरस्थित माइतीतर्फको परिवारको मनमा ची’सो प’स्यो । उनीहरुले ज्वाईंलाई कतै केही त गरेको होइन ? भनी सोधे ।